Kaspersky Internet Security 2012 *365 Days Keys upto Jan 2013...! | အိမ်လွမ်းသူ...
Kaspersky Internet Security 2012 *365 Days Keys upto Jan 2013...!
ကျွန်တော်ဒီတစ်ခါ Kaspersky Internet Security 2012 Key လေးတွေပဲ ရွေးပြီးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...! Video ဖိုင်လေးလည်း ထည့်ပေးထားပါတယ်...!ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ 439.36 KB ပဲရှိပါတယ်...! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ Media Fire လေးဖြင့်တင်ပေးထားပါတယ်...!ဖိုင်ထဲမှာပါတဲ့ READ ME 1&2 ကိုအရင်ဆုံးဖတ်ပေးပါ...!ပြီးမှ Install လုပ်ပါ...!
မှတ်ချက်။ ။ Key တွေထည့်သောအခါ မိမိရဲ့အင်တာနက် ကွန်နရှင်ကိုဖြုတ်ထားပေးပါ...!အားလုံးပြီးလို့
Activated ဖြစ်မှ ကွန်နရှင်ကိုပြန်ချိတ်ပေးပါ...!
Key ထည့်ပုံ Video လေးပါ.....!
No Response to "Kaspersky Internet Security 2012 *365 Days Keys upto Jan 2013...!"